Iwu Nchebe Social | Ozi bara uru maka onye ọ bụla.
Akwụkwọ: Iwu Social Nche
Enwere m ikike ịnweta ọgwụ mgbochi ọrụ, M 51 maka otu afọ, onye na-arụ ọrụ na Ngalaba nke Ime Obodo, afọ afọ nke ọrụ karịa 25 afọ,
Enwere m ikike ịnweta ọgwụ mgbochi, M 51 maka otu afọ, onye ụkọchukwu nke Ngalaba Ime Obodo;
Kedu akwụkwọ dị mkpa iji nweta ụgwọ ezumike nká maka ọnwụ nke onye na-enye nri?
Kedu akwụkwọ dị mkpa iji nweta ụgwọ ezumike nká maka ọnwụ nke onye na-enye nri? Otu nwa amaala ga-ede akwụkwọ na akwụkwọ ndị na-esonụ nke dị na ngalaba mpaghara nke Funding Fund nke Russian Federation: 1. Paspọtụ ma ọ bụ akwụkwọ njirimara ndị ọzọ ...
onye n'ime ndi oru gọọmenti etiti gọọmenti ???
onye n'ime ndi oru gọọmenti etiti gọọmenti ??? Hụ 79 FZ. Ọrụ? Biko: ndị ọkàiwu, ndị nchịkwa usoro, ndị dọkịta, ndị na-edekọ ego, wdg, wdg. Ọrụ nwere ike ịbụ ihe ọ bụla! Isi ihe bụ na onye nwere ...
Kedu otu kpọmkwem ihe njirimara na-ekpebi ezinyere ezinụlọ dara ogbenye?
Kedu otu kpọmkwem ihe njirimara na-ekpebi ezinyere ezinụlọ dara ogbenye? A na-ewere ego niile nke ezinụlọ (gụnyere ụmụ) na ọnụ ọgụgụ nke ndị òtù ezinụlọ niile, ma ọ bụrụ na nsonaazụ adịghị eru nha nke obere oge, mgbe ahụ ezinụlọ ...
oleekwa uru nke otu nwanyị di ya nwụrụ na-aga na Agha Ụwa nke Abụọ?
Gini bu uru nwanyi nke onye isi WWII so? gụnyere ụlọ obibi n'efu (ọ bụrụ na achọrọ) Ndị a bụ uru: - Dịka Art. Iwu iri abụọ na abụọ nke Iwu “On Veterans” nye ndị nwanyị nwụrụ anwụ…
Ha na-enye ezumike maka ọrịa na-elekọta nne na nna ha?
Ha na-enye ezumike maka ọrịa na-elekọta nne na nna ha? Enwere ike ịnye ezigara onye ọrụ n'ihi ọrịa ya, n'ihi nhụjuanya, dabere na mkpa maka ịgwọ ọrịa, yana ...
Kedu akụkụ bụ afọ ezumike nká. Ego ole% ole na ole%?
Ihe na 01.09.2018 19.09.2018
Kedu akụkụ bụ afọ ezumike nká. Ego ole% ole na ole%? Ndị na-akpọ Muscovites ka na-ejikọta mmekọrịta mmadụ na ibe ya ma ọ bụrụ na ị bụ nwoke na-erughi 55 ...
Kedu ihe bụ adreesị nke okpukpu ala ụgwọ dị na Russian Federation maka ịgbakọ akụkụ mkpuchi nke ezumike nká site na 1985 maka afọ 2001?
Kedu ihe bụ adreesị nke okpukpu ala ụgwọ dị na Russian Federation maka ịgbakọ akụkụ mkpuchi nke ezumike nká site na 1985 maka afọ 2001? Int bụ saịtị. iji rute oke ruru ụgwọ maka 2000-2001 ...
Ònye nwere ikike ịtụkwasị aka maka enyemaka mmadụ?
Ònye nwere ikike ịtụkwasị aka maka enyemaka mmadụ? Ndewo, Enwere m ike ịnweta enyemaka a ga-enyere m aka ma ọ bụrụ na edebanye m aha ma nata uru maka nlekọta onye agadi maka afọ 80? Anaghị m ...
Ònye ka a na-ewere dịka onye ezumike nká? Kedu otu esi enweta akwụkwọ na-akwụ ụgwọ ezumike nká n'ezie?
Ònye ka a na-ewere dịka onye ezumike nká? Kedu otu esi enweta akwụkwọ na-akwụ ụgwọ ezumike nká n'ezie? ihe weputara n'akwukwo akwukwo apughi igosi na onye obula bu onye ezumike n'ulo, na ulo ha nwere ike ...
Kedu ihe bụ mgbakwunye na ezumike nká mgbe afọ 80 gasịrị?
Kedu ihe bụ mgbakwunye na ezumike nká mgbe afọ 80 gasịrị? Nne m na 80 afọ gbakwụnyere 1440 rubles, na ezumike nke 9194,10 rubles. Ebee ka ha nwetara ego dị otú ahụ? gwa m na ọ bụ alimoni, ...
Enwere ike iwe ezumike nká na afọ 50 nke nne nwatakịrị nwere nkwarụ?
O kwere omume ịla ezumike nká na afọ 50 nke nne nwere nkwarụ? E kwesiri ịdọ gị aka na ntị mgbe ị na-eme ego ezumike nka maka nwatakịrị n'ụdị "nwatakịrị nwere nkwarụ" (ma eleghị anya dọọ aka ná ntị, mana echefuru), ...
Mgbe ha nyere nkwarụ na-adịghị agwụ agwụ. Ọ bụrụ na 2 otu nsogbu 3 afọ nkwarụ.
Mgbe ha nyere nkwarụ na-adịghị agwụ agwụ. Ọ bụrụ na 2 otu nsogbu 3 afọ nkwarụ. Na afọ 5. A na-eguzobe ìgwè nkwarụ na-adịghị agwụ agwụ n'ọnọdụ ikpe ndị a: 1. Ụmụ nwoke na-abaghị uru site na iri afọ isii na nwanyị ...
Nwanyị di ya nwụrụ mgbe ọ nwụsịrị nwere ike ịnata ụgwọ ezumike nká ya?
Nwanyị di ya nwụrụ mgbe ọ nwụsịrị nwere ike ịnata ụgwọ ezumike nká ya? O yikarịrị ka ọ bụghị. Ewoo, ị pụghị inweta ọkwa maka aha, ma ọ bụrụ na enweghị uru pụrụ iche. Na kedu ka ị ...
Kedu ọrụ nke onye ọrụ mmadụ?
Kedu ọrụ nke onye ọrụ mmadụ? Kwuo ọrụ na ndepụta nke ọrụ n'efu na obodo ahụ Ị ghaghị ịnwe nkwekọrịta nke a ga-enye ọrụ. nke ị na-akwụ. Na ...
ego niile na enyemaka site na steeti na ọnwụ nke na-emeri nri
ego niile na enyemaka site na steeti na ọnwụ nke onye na-eri nri-nri. Nha dabere na ụgwọ ọrụ na ogologo ọrụ nke onye na-enye nri. E debara aha ya na Pension Fund.
EFA na EBC.
EDV na EBC. EBC (ego nkwụghachi ụgwọ kwa ọnwa) maka ịkwụ ụgwọ ụlọ na ọrụ nkwukọrịta. EDV (ego ịkwụ ụgwọ kwa ọnwa) maka gị nkwarụ nke otu nke atọ. Ogo zuru oke bụ 3 rubles. Ogo nke "ngwugwu mmekọrịta" - ...
Tinye aka na polyclinic
Tinye aka na polyclinic. Ana m arụ ọrụ na polyclinic. N'ezie, ha aghaghị itinye ya na ebe obibi ha. Anyị juputara na ndị ọrịa dị otú ahụ, ha na-abanye aha, anyị tinye ha na kọmpụta, anyị edepụtara ebe ndebanye aha, ...
Kedu ihe m ga - eme ma ọ bụrụ na enwere m kaadị nchekwa nke Muscovite? Kedu ihe m kwesịrị ime? Iji kwụọ ụgwọ?
Kedu ihe m ga - eme ma ọ bụrụ na enwere m kaadị nchekwa nke Muscovite? Kedu ihe m kwesịrị ime? Iji kwụọ ụgwọ? Ònye ka? gaa ebe ị natara, ị ga-eme nke ọhụrụ ma maka oge ị na-enye obere ego ị ga-eji gaa njem. Ọ dị mma, bia ...
ihe di na Vasilii Chuikov na-enye ndi ozo aka oru
ma ọ bụ na-enye ikike iji nrite nke basil chuikov nye onye agha nke ọrụ. Tinye ya na nrite nke aha ya bụ Vasi Pupkin, ọ ga-aga nke ọma. na-enye, ma site n'enye aka onyinye ma ọ bụ maka ...
Ajuju 14 na nchekwa data emepụtara na sekọnd 0,582.